Kusarudza mhedzisiro yezvakanakisa hakusi nyore basa. Zvakawanda zvinoenderana nekuwedzera kwakakura miedzo kunoitwa, asi chikamu chikuru chayo zvakare chinoenderana newe – mushandisi. Wese munhu ane zvakasiyana zvinodiwa kana zvasvika kune a Virtual Private Network (VPN) sevhisi uye seichi kana kwete, hazvisi nyore kuwana icho chakanyanya pane zvese.
Muzhinji, kunyange zvakadaro, ndapfuura nemuwandu weVPNs ndakaona kuti kune mazita mashomanana makuru akauya kakawanda uye akarongedza zvikuru zvikuru mune zvose zvinokosha. Izvi zvinosanganisira kuvanzika uye kusingazivikanwi, kukurumidza uye kugadzikana, maitirwo ebasa revatengi, zvigadzirwa zvemagetsi uye zvechokwadi, zvimwe zvikamu pamwe nekusarudza kwekutengesa.
0.1 Yakanakisisa VPN’s prys Kuenzanisa & Zvirongwa Ongororo (Yakawedzerwa Kurume 2020)
1 Die beste 10 VPN-dienste ye2020
1.3 5. Vinnigste VPN
1.4 Chinokosha VPN-funksie # 2-sekuriteit
1.4.1 Yakakurudzirwa VPN yekumhanya kwakanyanya:
1.5 Belangrike VPN-funksie # 4 – Nzvimbo Spoofing
1.5.1 P2P en ushamwari hweVPN
1.6 Sleutel VPN-funksie # 6 – Vatengi-diens
2 Nei Upenyu Hurefu VPN Ingave Kwete Kuita Zvakanaka
3 VPN Shandisa Nyaya – Nei Uchifanira Kufunga nezve VPN?
3.1 1.Pamusoro VPN yeMabhizimusi
3.2 3. Yakachipa VPN sevhisi
3.3 5. VPN yeVashandisi ve Android
3.4 7. VPN yeDhijitaru rusununguko
Yakanakisisa VPN’s prys Kuenzanisa & Zvirongwa Ongororo (Yakawedzerwa Kurume 2020)
Zvese zvakanakira muzvikamu zvese, kune vatatu VPN vanopa iwe vaunofanirwa kutarisa muna 2020: NordVPN, Surfshark, uye ExpressVPN.
Beste pricekutema-gratis proefbedieners Netflix-ondersteuningP2P-ondersteuningsmano
$ 3,49 per maand 30 mazuva 3000 + 5
$ 1,99 per maand 30 mazuva 3000 + 5
$ 0,83 per maand 10
$ 2,42 per maand 5
$ 7,99 per maand 31 mazuva 2000 + gedeeltelik 30 mazuva 700 + gedeeltelik 7 mazuva 1100 + gedeeltelik Mazano Anoshanda eVPN Shoppers
1- NordVPN ikozvino iri kutengesa ichipa 70% mutengo – tinya apa kuraira (mazuva makumi matatu kwemaedzo).
2- Ungasarudza sei VPN? –
3- Yakasiyana kesi yekushandisa kesi yedu yakakurudzirwa VPN:
Die beste 10 VPN-dienste ye2020
Voorspoed vir Noord-VPN
Inonzwisisika yenguva refu chirongwa chemitengo
Anozivikanwa uye anotaura-akazara
ExpressVPN ndeimwe yeyakavimbika uye inorumbidzwa mhando muVPN bhizinesi uye iri, imwe yezvisarudzo zvedu zvepamusoro. Yakavakirwa muBritse Maagde-eilande, basa ravo rakavimbika, rakachengeteka uye rakasimba.
Kubata zvinopfuura maS3,000 munyika dziri munyika ye94 kumativi ose enyika, ruzivo rwaro rwakawanda runopa vashandisi vanobva kunenge chero nyika ipi neipi zvinokurumidza kusvika. Nyaya yezvakagadzirirwa inopa nguva yakareba uye inoratidzika, kusanganisira top-notch kodering, kuwanikwa kune zvinyorwa ruit geolocation-zvigadziriswa mabasa akaita seNetflix ne BBC iPlayer uye kutsigira kweP2P fair.
Zvechokwadi, kunewo toni yezvimwe zvinowedzera zvinouya nebasa rinoita kuti rive nhamba pane iyi.
Mitengo inotanga kostuum kos $ 8,32 pamwedzi zvichienda mberi, izvo zvinosuruvarisa iri kudivi rakakwirira.
Dzidza zvakawanda pamusoro pe ExpressVPN mumhinduro yangu yakadzika.
Nadele van ExpressVPN
Ndakakwanisa kuwana michina yeC83 kuti iite mavhidhiyo pa ExpressVPN. Izvi hazvisi nguva dzose-ruit VPN dzakawanda.
Sneltoets toets kubva kuServer-bediener.
Ping-snelheid vir kuSingapore-bediener is ongeveer 11 ms, en u kan ook gebruik maak van hierdie server.
Spoedtoetsuitslag vir kuSingapore-bediener.
P2P uye Torrenting
Nhanho dzaive dzakasvibira pakufamba. Ndinofunga kuti P2P mutengesi yakakwanisa kuwana zviri nani kupfuura nguva dzose.
Kurumidza uye Yakasimba
Iri zita rinogona kunge riseanyanyo kujairika kune vazhinji vako, asi ini pamwe ndakashamisika sezvauri kunzwa ikozvino. Pakutanga kutarisa iyo TorGuard mutengi ichaita langer yechinyakare-chikoro uye isina kupukutwa zvakatenderedza pamahedhi seedu vatatu vepamusoro pane yedu Beste VPN runyorwa.
Asi huwandu hunosarudza humwe hwakasarudzwa mukati mebasa pamwe nekunakidza kushamwaridzana kukurumidza kuita izvi zviri nyore pane imwe yepamusoro sarudzo dzangu. Iko kukwanisa kugadzirisa zvinyorwa zvinyorwa zvisingaratidzi sepfungwa huru asi inobvumira vashandisi kuenzanisa kuchengeteka nekusazivikanwa maererano nezvinodiwa zvavo.
TorGuard iri kutangawo kupa ruzivo rwechizvarwa chinotevera cha WireGuard-protokol, zvinoreva kuti iri kurarama pamucheto weVPN tegnolojia.
Mutengo unotangira kubva pasi se $ 4,99 pamwedzi.
Dzidza zvakawanda pamusoro peTorGuard VPN muchirongwa ichi.
Nadele van TorGuard
Koppelvlak inoda zvishoma kudyidzana
5. Vinnigste VPN
Voordele van FastestVPN
Kusvibiswa-kutengeswa kwenguva refu kwezvirongwa
Hapana mitemo yekutema
Kukwirira kuwanika uye kupedzisa
Inobatanidza zvinyorwa zvakadai seadblocker uye anti-malware
SOCKS5 Proxy akabatanidzwa
Guru nokuda kwezvinobudisa nhau
Pros van Hotspot Shield
Dzvitsaurirwa, kurarama 24/7 tegniese rubatsiro
Zvose zvakavanzika kubva kune vatengesi
Nguva yakareba chaizvo-mari yekudzoka nguva
Bedieners met osoon gereed
Toegewyde P2P seva
Maseraji akaenzanisirwa kutenderera
Kuwana zvakakwana kuNetflix nedzimwe nzvimbo-yakagadzikana zvayo
Hapana ma-server anowanikwa nevamwe
Zviri nyore kushandisa-app
Pros I IPVanish
Iva nekukwanisa kuderedza mari ye VOIP
Inodzivirira pakadzika-pakket kuongororwa
Yakurudzirwa VPN kunyanya kusingazivikanwi:
NordVPN – Kuve yakadzika muPanama, iyi kambani yeVPN inowira pasi pesimba renyika (zvinoitika kuti hazvina zvakawanda munzira yemitemo yekuchengetedza data).
Surfshark – Surfshark inogamuchira ese makuru makadhi echikwereti emabhadharo (VISA, Master, AMEX, Discover) uye inopa akasiyana maitiro ekubhadhara asingazivikanwe kusanganisira Bitcoin, GooglePay, uye AliPay.
Chinokosha VPN-funksie # 2-sekuriteit
Kubva ku-koderingsprotokol kune yakavakwa mune akachengeteka maficha evatengi-sagteware, VPN’s en vanopa chengetedzo pamazinga mazhinji. Eh, iyo inonyanya kukosha ndeye kuchengetedzwa uye kuvimbika kwekubatana kwainochengeta pakati pako neInternet kunyangwe.
Imwezve inoratidza kuti vazhinji Skynprivaatnetwerk vanopa rubatsiro runopa kuchinja kwekuuraya. Izvi zvinoreva kuti chero nguva iyo kuwirirana pakati pechigadzirwa chako uye sevhareji yeVPN yakaputsika kana yakarasika nokuda kwechikonzero chipi nechipi, muteresi weVPN achamisa deta rose kubva pakubuda kanak koifa mune.
VPN’s zvakare yakave yakapoteredza kwenguva yakakwana zvokuti mamwe webblad kana kunyange hurumende vane ruzivo mukuziva basa reVPN. Vatapi venhepfenyuro veVPNs vanoziva izvi uye vauyedza chimwe chinhu chinonzi Stealthing, Ghosting kana VPN Obfuscation (izwi rinotsanangura, asi rinowanzoreva chinhu chimwe chete). Izvi zvinobatsira kuvhiringidza nzira dziri kutsvaga vashandisi veVPN.
Mamwe maVPN anoenda kuhurefu hwakakura kuti abatsire vatengi vavo kuvanza mazita avo uye vauya nechimwe chinhu chinonzi kaviri VPN kana yakawanda-hop. Izvi zvinoreva kuti unobatanidza kune imwe VPN-bediener uye kubatana kwacho kunoiswa kuburikidza neimwe VPN seva usati washaya Internet. Kunze kwekubva payshiya, iyo kodering yakapetwa kaviri zvakare iyo inowedzera imwe dura rekuchengetedza.
NordVPN inoshandisa kaviri kunyorera kuti ive nechokwadi chepamusoro chekuvanzika uye chengetedzo (dzidza zvakawanda mune yedu NordVPN review).
Kunze kweizvi, zvimwe zvinowanikwa zviri kuwedzerwa kune vakawanda Skynprivaatnetwerk-dienste nguva dzose dzakadai seMalware skandering, webbanier blokkeer nezvimwe. Kunyange zvazvo zvose izvi zviripo, usambokanganwa chinangwa chepfungwa – kuchengeta hukama hwako hwakachengeteka uye husingazivikanwi.
Yakakurudzirwa VPN yekumhanya kwakanyanya:
ExpressVPN – Inotakura maseva anopfuura zviuru zvitatu munyika dzepasi rose, netwerk yayo yakawanda inopa vashandisi kubva kunenge chero nyika inoshamisa inosvika nzvimbo.
ExpressVPN-spoedtoets inobva kuAsia-bediener. Ping = 11 ms, laai = 95.05 Mbps, laai = 114.20 Mbps (ona zvakazara ExpressVPN kudzokorora).
ExpressVPN-snelheidstoets mhinduro kubva kuAustralia-bediener. Ping = 105 ms, laai = 89,55 Mbps, laai = 38,76 Mbps.
Belangrike VPN-funksie # 4 – Nzvimbo Spoofing
Yeuka kuti haisi nguva dzose nezvekumhanya, asi zvakare kuwanikwa. Kana iwe uchida kufambisa Netflix US yezvinhu semuenzaniso, iwe uri kuzoda VPN ine maseva munyika iyoyo. Saizvozvo, muUK kana iwe uri kutarisa kutenderera iBBC zviri mukati.
Kana uri mune imwe nyika inofanirwa neInternet zvikuru, kana iri kuenda kune imwe, yakadai seChina, iva nechokwadi chokuti unosarudza basa reVPN rakanaka pakufamba-famba mabheji. Inonyanya kuoma muChina sezvo inenge zvose zvese paIndaneti inofungidzirwa uye yese yeVPN mabasa kunze kwekushanda kwehurumende kana kubvumidzwa kunorambidzwa.
Kuti akunde izvi, mamwe makambani eVPN anoshandisa bediener verberging en anogona kubatsira mukupfuura zvimwe zvirambidzo zvepaintaneti vroeëre netwerk firewall. Izvi zvinovimbisa kuti VPN yako inoshanda munyika idzodzo ne sensuur yakasimba.
P2P en ushamwari hweVPN
TorGuard -Mhando yepamusoro yekumhanyisa matanda, kukosha kukuru, uye kusvika pakatarisana nerukova kune vakawanda ISP’s.
Sleutel VPN-funksie # 6 – Vatengi-diens
TorGuard – imwe yeakanakisisa anotsigira VPN masevhisi, inhanya inoshanda inoshanda kutsigira vashandisi vayo (dzidza zvakawanda mukati Kuongororwa kwaTimote Toru).
Sezvakaitwa nemabhizimisi ose, musha weVPN une mbwa dzepamusoro uye imbwa dziri pasi mubasa revatengi. Handisi kuzotumidza kuti ivo varipi pano, asi iva nechokwadi kuti ndichavadana-ruit izvi mumunhu mumwe oga weVPN.
Chinhu chimwe chandinoda kusimbisa ndechekuti kune sevhisi yakasarudzika seVPN, hapana zvachose chikonzero chekuti kambani inoridza machiri isape rubatsiro rwakanaka rwevatengi. Izvo zvinodikanwa. Kana iwe uri kusaina kune VPN sevhisi, ita shuwa kuti iwe unoenda kuburikidza nekumwe kuongorora kuti vanoona sei kwavanoita mukutsigirwa kwevatengi.
Kuti vamwe vanovimba neti ticketing system yakaipa kwazvo, asi vangango zera kupindura. Unogona kufungidzira kugara kumba uye kuwedzera kunetseka sezvo imwe neimwe e-pos inodzoka kwauri sampioen mezuva kana maviri – youuka, ek is kubhadhara kune en rombo rekushandisa basa ravo.
Nei Upenyu Hurefu VPN Ingave Kwete Kuita Zvakanaka
Vamwe VPN vanoita sevashandi vane pfungwa iyi yekupa ‘Hupenyu hwekuita Deal’ ruit yavo masevhisi. Nepo izvi zvinganzwika later kuba kune vermy iwe uchifungidzira hupenyu hweVPN pamwe $ 100 – mira ufunge nezvayo kutanga.
VPN’s nemasikirwo azvo zvinoda kuti makambani anyure huwandu hwemari mukuvandudza zvigadzirwa, zvigadzirwa zvemitemo, zviumbwa, pamwe nemamwe mimwe mitengo. Kana ivo vachizotora mari yako kamwe uye ndokupa iwe hupenyu hwekushumirwa – chii chinoitika kana dziva remari parinotanga kuoma?
Funga nezvayo se ponzi-skema, uko sevhisi yako iri kutsigirwa nuwe aanmeldings kuchirongwa ichi. Kana chirongwa ichi chikanyanya kuremerwa kuti mari nyowani itsigire, inodonha. Mune emari ponzi zvirongwa zvinozoguma nekurasikirwa kwemari.
MuVPN hazvisi pachena. Unogona kucherechedza zviratidzo pasina sevhisi ichibuda kunze kwebhizinesi. Iyo inononoka kumhanya, kunetseka kubatanidza, uye zvakanyanya kupfuura zvese – mikana yekuchengetedza inogona kukonzerwa nekusakwanira kwebasa uye kutsigirwa.
Zvikasadaro, iye anopihwa webasa anogona kupa mari yaanowana nokutengesa data rako, to the rakatonyanya pane kupa pasi pekunze masevhisi. Saka usati warova pasi kadhi rako rechikwereti kwehurongwa hwehupenyu hwese, funga nezve njodzi inogona kuvapo inogona kubuda muchirongwa chakadai. Hapana munhu anokwanisa kupa chero service yemahara.
VPN Shandisa Nyaya – Nei Uchifanira Kufunga nezve VPN?
1.Pamusoro VPN yeMabhizimusi
Yakakurudzirwa VPN yevadzidzi: NordVPN (15% mudzidzi mutengo)
Tese takaendako sevadzidzi; nguva dzose ipfupi paneel mari uye kupinda mudambudziko. Nekuda kwekuputika kwedhijitari nemagariro ezvemagariro, kuchengetedzeka uye kuvanzika pamambure kwave kuri kudikanwa kwekukurumidzira kwevadzidzi pasi rese.
Kunyangwe kazhinji kazhinji vadzidzi vangasarudza iyo yakachipa sevhisheni yakachipa, sei uzvigadzirire iyo kana yemadhora akawanda iwe waunogona kutenga mune imwe yeVPN yakanaka kwazvo mumusika. NordVPN inokodzera chikamu ichi zvakanaka uye mutengo padivi, inopa vadzidzi boka rose rezvakawedzera maficha.
Nharembozha yavo yekushandisa uye browser browser zvakare inovaita ivo vakanakira vadzidzi vari kuenda, vachibvumira basa rakachengeteka pamalaptops vermy uye mafoni chero kupi pamusasa.
3. Yakachipa VPN sevhisi
Yakakurudzirwa VPN yekuvharira: ExpressVPN, NordVPN
Mamwe midhiya kutepfenyura masevhisi anoregedza zvemukati zvichikonzerwa nenzvimbo nekuda kwezvinhu zvakasiyana ofte nyika-yakatarisana nemitemo, mitemo yekutarisira, kana zvibvumirano zvemitemo. Izvi zvinosanganisira BBC iPlayer uye Netflix. Kuti uende kune izvi, basa reVPN rinobatsira asi kwete chero VPN chero ipi zvayo ichaita.
Mamwe maVPN ari nani paneel Mamwe, sezvo vazhinji vanongotenderera paneel nzvimbo dzeva bediener. Iyo yakanakisisa ichashandura zvakajeka seva IP’s uye ichaita mabasa e-whitelisting venster yakamborambidzwa IP’s. Ichokwadi, vamwe VPN vanoziva kuti havakwanise kutsigira Netflix uye vanotaura nokutendeseka kuti havakwanisi mumitemo yavo yebasa.
Iine yakanakisa kumhanya mhanyisa uye yakakura kwazvo bediener netwerk wandei, ExpressVPN uye NordVPN vangangodaro vaviri akanakisa mubhizinesi rekutepfenyura midhiya kubva kwakawanda zvinyorwa – kwete Netflix chete. Iyo inomhanyisa inogona kubatirira nyore nyore kune HD vhidhiyo uye Netflix iri zvechokwadi iri pamusoro wevanhu vazhinji ‘inoda’ rondedzero.
5. VPN yeVashandisi ve Android
Yakakurudzirwa VPN yeTorrenting: ExpressVPN, TorGuard
Vamwe vako vanogona kunge vakanzwa kuti maVPN anoita kuti P2P faira igoverane (Kuchinjika) nekukurumidza asi izvo hazvisi zvechokwadi. Chii chiri chokwadi hazvo ndechekuti kudanha murwizi kune dzimwe nyika kunogona kukuita kuti ubatwe slegs faindi akakosha kana kunyange nguva kana kana ukabatwa uchidurura zvinhu zvisiri izvo.
Muzviitiko zvakawanda kunewo veInternet diensverskaffer vanokanda mafashama kubva pavanoti P2P fava vanogovana vari kudya yakawanda yebhendwidth iripo .Izvi zvinowanzoitika mukukanda, kuderedza kukurumidza kwevashandisi veP2P.
‘N VPN-yakanaka – seTorGuard, ichakubatsira kuti utendere kupfuura nemafashama nema ISP’s. Muchokwadi, kana uchishandisa VPN kukurudzira, yako ISP haizomboziva kuti uri kufambisa mvura.
7. VPN yeDhijitaru rusununguko
Isu tinoshandisa sangano rinobatanidzwa munyaya ino. WHSR inowana mari yekutsvaga kubva kumakambani anotaurwa munyaya ino. Maonero edu anobva ruit zvakaitika chaizvo uye chaiyo sevha data.
Kusarudza mhedzisiro yezvakanakisa hakusi nyore basa. Zvakawanda zvinoenderana nekuwedzera kwakakura miedzo kunoitwa, asi chikamu
Iyo yakanakisa VPN-Dienste ye2020: Gumi yepamusoro VPN Zvakafananidzwa
Kusarudza mhedzisiro yezvakanakisa hakusi nyore basa。 Zvakawanda zvinoenderana nekuwedzera kwakakura miedzo kunoitwa，asi chikamu chikuru
Serveis de VPN iakanakisa VPN ye2020: Gumi yepamusoro VPN Zvakafananidzwa
Sandheden om ubegrænset hosting
Ölçüyə qədər uzun bir yazı kəsmək üçün ən yaxşı düzəliş tövsiyələri
Bochum Weebụ Kachasị Mma 2020 (Dabere na Real Data i ụnọdụ Ojiji)
Ağır Trafik üçün Veb saytınızı sınamaq üçün 7 vasitə
Jak vložit formulář Google do WordPress
Ama-plugin amaningi we-30 kakhulu we-WordPress asekelwe ku-Aantal aflaaie ku-2016
Iifayile ze-Facebook ze-17 Kwi-WordPress-integrasie
Kontrolli i quidem i mbrojtjes në 6 Hospes Aenean nga çdo herë – quam dhe eos konfiguruar
Efika Bloggeri teavitusstrateegia
Արդյունավետ շուկայավարման արդյունավետության 10 հիմնական կանոններ
أنا Parechji Casi d’usu di VPN: Cumu una VPN pò esse Utile